Mawduucyada Jason Oakley ee Martech Zone |
Maqaallada by Jason Oakley
Jason Oakley waa Agaasimaha Suuqgeynta Wax soo saarka ee Chili Piper. Jason waa suuq-yaqaan khibrad u leh soo-saarka oo leh hammi wax-soo-saar, SaaS, ganacsi-abuur, iyo guusha macaamiisha. 10 sano ee uu ka shaqeynayay bilowga yar-yar ama dhexdhexaad, Jason wuxuu fursad u helay inuu muujiyo guusha shaqooyin badan oo muhiim ah oo iibinta iyo suuq geyn ah, isaga oo u suurta geliyay inuu noqdo suuq wax soo saar xirfad leh oo doonaya inuu fahmo dhamaan safarka macaamiisha.
Chili Piper: Waa jadwal jadwal otomaatig ah loogu talagalay Is-beddelka Lead Lead
Talaado, July 21, 2020 Khamiista, Oktoobar 1, 2020 Jason Oakley
Waxaan isku dayayaa inaan ku siiyo lacagtayda - maxaad aad ugu adkeysay? Tani waa dareen caadi ah inta badan iibsadayaasha B2B. Waa 2020 - maxaan wali ugu lumineynaa iibsadayaasheena (iyo kuweenna) waqti hawlo badan oo qadiimi ah? Shirarku waa inay ku qaataan ilbiriqsiyo si loo ballansado, maahan maalmo. Dhacdooyinka waa inay ahaadaan wadahadal macno leh, oo aan ahayn madax xanuun. E-maylku waa in looga jawaabo daqiiqado gudahood, oo aan lumin sanduuqaaga. Is dhexgal kasta oo ay weheliso